Inkonzo yoYilo lweWebhusayithi
UMID-MAN - UYilo lwewebhusayithi ye-AGENCY COMMIT UX/UI IIMFUNO ZOMGANGATHO
Ukuyila iiwebhusayithi ezisemgangathweni kwi-Arhente ye-Mid-Man. Ukudala kunye nokuphuhlisa iisayithi ezizisa ixabiso kunye nokusebenza kakuhle ziinjongo iqela leMid-Man elijolise kuwe. I-Mid-Man iya kukunceda ukusombulula ingxaki yokufikelela kubathengi ngenkonzo, uyilo lwewebhusayithi, I-CREATIVE - OPTIMIZATION - I-SEO STANDARD - PROFESSIONAL and EFFECTIVE.
INGABA UYINGENA KWINKQUBO OKANYE UZINIKELE UKUBA ULAHLEKILE?
Ngexesha lobuchwephesha bedijithali i-4.0, kunye nophuhliso olukhawulezayo lwe-Intanethi, intsingiselo yeshishini le-intanethi okanye intengiso ye-intanethi izise impumelelo yoqoqosho kwiindlela ezininzi zeshishini kwiHlabathi liphela. Uthini ngawe? Ngaba uyila iiwebhusayithi kwaye uthathe inxaxheba kwimarike yeshishini le-Intanethi?
Ngokwengxelo ye-e-commerce ye-2019 yaseMzantsi-mpuma ye-Asia nguGoogle, iTemasek, kunye neBrain & Company, umyinge wokukhula ophakathi kulo lonke ixesha le-2015-2025 ye-e-commerce yi-29%. Ngezinga lokukhula ngokukhawuleza elinjalo, ithuba lokuba uthathe inxaxheba kwimarike yoshishino lwe-intanethi livuleleke ngokubanzi.
Ngokutsho kwe-E-commerce Association (VECOM), ukususela ngo-2019, malunga ne-42% yamashishini anewebhusayithi, apho ukuya kuthi ga kwi-37% ifumene ii-odolo ngewebhusayithi. Abathengi kuphela abathengi, abathengi abangamashishini aodola ngeakhawunti yewebhusayithi ngesantya ukuya kuthi ga kwi-44%. Oku kubonisa ukuba abasebenzisi ngokuthe ngcembe baguqukela ekuthengeni iimpahla kwiwebhusayithi endaweni yokuthenga iimveliso zemveli.
Ngokusekwe kutshintsho kwindlela yokuziphatha ngexesha le-COVID, amashishini angabanikazi bewebhusayithi ngoku anenzuzo ekukhuphisaneni kwimarike ye-Intanethi. Unokuba noloyiko malunga nokukhuphisana nabangaphambili, kodwa kwamkelekile. Kuba ngokusekwe kwinto eyenziwe ngabakhuphisana nabo, eli lithuba lokuba ufunde, ube namava, uvelise izinto ezintsha kwaye wenzele iwebhusayithi yakho.
Ngokwedatha, ukusukela ngo-2019, ukuya kuthi ga kwi-55% yamashishini anemveliso ezinzileyo, kwaye i-26% ithatha iwebhusayithi njengesona sixhobo siluncedo sokuthengisa imveliso. Ke, into yokuqala kunye neyimfuneko ngoku kukuyila iwebhusayithi eyenzelwe wena. UMid-Man uya kukukhapha, enze uyilo lwewebhusayithi yobuchwephesha, kwaye ancede imisebenzi yakho yeshishini ukuba ikhuthazwe kwaye iphuhliswe.
I-MID-MAN inebhongo ngokuba yiyunithi yoyilo lwewebhusayithi yobuchwephesha kunye neminyaka emininzi yamava ahlukeneyo kwiimarike zentengiso. Siza kukukhapha kwaye sikuxhase ekuyileni i-website ESEBENZAYO, UMGANGATHO, UBUDALA, KUNYE NOBUCHWEPHESHE. UKWAneliseka kwakho luXANDUVA loyilo lwewebhu TEAM e-MID-MAN.
Indawo yentengiso yindawo yedabi. Iwebhusayithi isisiseko, i-arsenal, kunye nendawo yolwazi lwakho. Ukuba awunaso isiseko sewebhusayithi esisemgangathweni, qala ukuyakha namhlanje. Kweli xesha lotshintsho lwedijithali oluluqilima, ukuba newebhusayithi akwanelanga. Ukuba newebhusayithi kwaye, ukuyisebenzisa ngokufanelekileyo, ukunceda ukuphucula ingeniso yinjongo ekufuneka ujolise kuyo. Ngaphandle koyilo lwewebhusayithi olunomtsalane, kufuneka ubeke ingqalelo kumava omsebenzisi. Ngenxa yokuba uyilo lwewebhu olunenkqubo yokuthenga elula kwaye elula kunye nolwazi luyimfuneko ukuba "uvale ii-odolo" kunye nabathengi ngokulula, i-MID-MAN AGENCY ene-ecosystem yezisombululo zokuthengisa ngokupheleleyo iya kuba yibhulorho yokukunceda ukuba usondele kubathengi bakho ekujoliswe kubo. kwimarike ye-Intanethi.
Ngamandla oyilo lwewebhu, ujongano oluqhelekileyo, kunye namava omsebenzisi, i-MID-MAN inebhongo ngokuba yeyona yunithi iphambili yoMQULU KUNYE NEPRESTIGE yoyilo lwewebhusayithi.
KUTHENI KUFUNEKA UYIYELE IWEbhsayithi?
Iwebhusayithi lijelo lonxibelelwano kunye nesixhobo soshishino esikhokelayo namhlanje. Iwebhusayithi ifana nobuso obumele wena, ishishini lakho, okanye umbutho wakho kwiqonga letekhnoloji yedijithali 4.0 IOT.
Okubalulekileyo, ngexesha lencopho yobhubhani we-Covid-19, uqoqosho lwehlabathi liphela lwachaphazeleka kakhulu. Amashishini amaninzi aye achaphazeleka ngokuthe ngqo, njengokuthumela ngaphandle-ngaphandle, ukhenketho, njl., kodwa ingeniso evela ekuthengeni kwi-intanethi ngeewebhusayithi. Iiwebhusayithi ezininzi zamashishini kunye namaphepha e-e-commerce e-B2C asanyuke nge-20-30%, ade anyuke kakhulu ngezinto eziyimfuneko kunye nezixhobo zonyango. Oku kubonisa ukuba utshintsho kwindlela yokuziphatha yabasebenzisi yokuthenga ngokuthe ngcembe iya kwimarike ye-intanethi.
Ngotshintsho lwedijithali kunye nendima ebalulekileyo yewebhusayithi namhlanje, akukho sizathu sokuba uthandabuza ukuyila iwebhusayithi kunye nokukhuthaza uphawu lwakho kwimarike ye-Intanethi.
Uyilo lwewebhusayithi ye-SEO esemgangathweni
Umgangatho woyilo lwewebhu ye-SEO yenza kube lula kuwe ukuba uphucule kwaye ubeke iimveliso kunye neenkonzo zeshishini lakho kukhangelo olukwi-TOP kuGoogle. Kwi-MID-MAN, i-website yenzelwe imigangatho ye-SEO ukusuka kwixesha lokwakhiwa kwewebhusayithi, iphuculwe ukusuka kwikhowudi yomthombo ukuya kwiimpawu, i-OnPage kunye ne-OffPage, ukuyila okuphendulayo, okukhuselweyo nge-injini yokukhangela ye-SSL protocol. ..
IWEBSITE YOYILO ISISEKO KWI-AGENCY YOMID
Ngokungafaniyo nezinye iiyunithi zoyilo lwewebhusayithi kwimarike namhlanje, i-MID-MAN ayipheleliselwanga kulwimi oluthile okanye iqonga loyilo. Iqela lobunjineli be-MID-MAN elinobuchule obunqamlezileyo bokuyila i-WordPress, i-Laravel, i-React, i-React Native, i-Node JS ... iya kuzalisekisa zonke iimfuno zoyilo lwewebhusayithi yakho.
KWATHENI UMID-MAN AKHETHE UYILO WEWEBHUBHUSE YE-MULTI-PLATFORM?
UYILO WEWEBSITE YOLWAZI OLUNINGI
UYILO WEWEbhsayithi yangaPhakathi
Ifenitshala ithathwa njengeshishini lobugcisa obusetyenzisiweyo. Ke ngoko, iwebhusayithi yoyilo lwangaphakathi kufuneka ihlangabezane nobuhle, inomtsalane, kwaye ibonise isitayile sophawu lweshishini lakho. Ukuba newebhusayithi yangaphakathi kunceda ishishini lakho liphakamise igama lakho kwaye lifikelele kwifayile enkulu yabathengi abanokubakho kwimarike ye-Intanethi.
UKUSUKA KWIINGCINGA UKUZE KUPHUNYEZELWE
AMANYATHELO OKWENZA IWEBSITE YOBUCHULE PHAKATHI KOMNTU
I-MID-MAN, kunye ne-motto yomsebenzi we-customer-centric, ihlala ijolise kwizisombululo zenkxaso yabathengi kwimisebenzi yoyilo lwewebhu. Sinenkqubo yokusebenza ethe ngqo ukuze sikukhonze kakhulu ngobungcali.
Abasebenzi abanamava be-MID-MAN badibana nabathengi, bamamele imibono yoyilo, kwaye baxoxe ngeempawu ozifunayo kuyilo lwewebhu. Emva kokubonisana nezisombululo kunye neempawu ezifanelekileyo kwiinjongo zakho kunye neemfuno, sicwangcisa ukuyila.
Ukutyikitya kunye nentsebenziswano
Ukuqinisekisa amalungelo akho, sikwenza ngokudibeneyo uxwebhu olusemthethweni. Ukuxhawulana okuncinci kubonisa umoya omkhulu. I-MID-MAN iya kuba liqabane lakho, ikuncede ukuba wakhe isisombululo esifanelekileyo soyilo lwewebhusayithi kwaye uphakamise uphawu lwakho kwimarike.
Ngokusekwe kwiimbono zakho, iqela loyilo lwewebhusayithi ye-MID-MAN enengqondo yokuyila kunye nesabelayo iya kudala intle, inomtsalane, kunye noyilo lwewebhusayithi yedemo ye-UI/UX. Emva kokuba uphonononge idemo, iqela loyilo liyakwenza uhlele ukuze ugqibezele uyilo oluneenkcukacha.
Ukususela kuyilo esinalo kunye namava aqokelelwe kwiminyaka emininzi yokusebenza, iqela labadwelisi beprogram liza kucwangcisa inkqubo ye-UX esemgangathweni (amava omsebenzisi) kunye nokuphumeza inkqubo yewebhu ukuqinisekisa iimpawu ezipheleleyo ezixabisekileyo kwaye zilungele iwebhusayithi yakho.
Vavanya kwaye uhlele
Kweli nqanaba, uyilo lwewebhusayithi yakho phantse lugqityiwe. Nangona kunjalo, ukwenza eyona mveliso igqwesileyo kunye nokuqinisekisa ukuba iwebhusayithi isebenza ngokutyibilikayo nangokufanelekileyo, iqela lobuchwephesha le-MID-MAN liya kukhangela kwaye lilinganise ngaphambi kokuba liqalise ukusebenza.
Unikezelo olubanzi luxanduva lweqela lonke le-MID-MAN. Iqela le-MID-MAN liya kukukhokela ngabalawuli bewebhu abazinikeleyo nabacingayo. Nangona iprojekthi igqityiwe, iqela le-MID-MAN lihlala likulungele ukukuxhasa ekusebenzeni nasekulawuleni iwebhusayithi.
KUTHENI KUFUNEKA UKHETHE IINKONZO ZOYILWA KWE-WEBSITE KWAKUFUNEKA KUPHAKATHI ENDODA?
I-MID-MAN AGENCY ineqela labasebenzi abanamava ekuyileni iiwebhusayithi ezinamashishini amaninzi. Ngeelwimi zoyilo ezahlukeneyo, siyahlangabezana nazo zonke iimfuno zakho. Qhagamshelana nathi ukuze ufumane uyilo lwewebhusayithi oluchubekileyo nolusebenzayo.
Uyilo lwewebhusayithi olusisiseko
Iwebhusayithi ukwazisa abantu, iivenkile, kunye namashishini aphakathi namancinci
Iwebhusayithi yokuthengisa ngokubanzi
Uyilo lojongano olukhethekileyo ngesicelo: ujongano lwekhasi lasekhaya eli-1
Ukuhlela ulusu lwasimahla: ukuya kuthi ga kwi-3 amaxesha
Inkqubo esisiseko esebenzayo ngokwemfuno
Isiphumo seWebhusayithi: Esisiseko
Iqonga lokuCwangcisa: Ngokuzithandela
UYilo oluQhelekileyo lwe-UI/UX – Ujongano lomsebenzisi kunye namava oMsebenzisi
Ukuphendula okusemgangathweni - iyahambelana nezikhangeli ezininzi kunye nezixhobo ezinjengeePC, iilaptops, iitafile kunye neselfowuni.
Ukuphucula isantya sokulayisha iphepha
Inkqubo ye-SEO esemgangathweni
Ukhuseleko lwe-SSL lwasimahla kunyaka wokuqala
Ukunikezela ngekhowudi yomthombo (ikhowudi yomthombo)
Iwaranti yobomi kunye nokugcinwa
Inkxaso yobugcisa engama-24/7
Uyilo lwewebhusayithi ephezulu
Iwebhusayithi ukwazisa iivenkile, amashishini amakhulu
IWebhusayithi yeshishini le-intanethi, iindaba, iinkonzo, imali, itekhnoloji eyodwa, imizobo ephezulu…
Uyilo lojongano olukhethekileyo kwimfuno: Inani elingenamda lezikhumba
Ukulungiswa kwesikhumba samahhala: Ukuya kuma-5 amaxesha
Udweliso olusebenzayo lwenkqubo olukwimfuno
Isiphumo seWebhusayithi: Advanced
Udibaniso oludityanisiweyo lwamajelo amaninzi nomntu wesithathu
ISicombululo seSolulo sokuThengisa esiBanzi sasimahla
Izaphulelo kwimirhumo yenkonzo yeNtengiso
Ukuphendula okusemgangathweni- iyahambelana neziphequluli ezininzi kunye nezixhobo ezinje ngePC, iilaptops, iitafile, iselfowuni, ezihambayo,…
KUTHENI I-WEBSITE IYILWA KWA-MIKO TECH INAMAXABISO AMANINZI?
Uyilo lwewebhusayithi oluphuculweyo ngokwemigaqo ephambili ejolise kubathengi bakho yinjongo uMID-MAN ejolise kuyo. Siyaqonda ukuba nakweyiphi na imboniselo nakweyiphi na isayizi, kukho imfuneko yoyilo lwewebhusayithi oluchubekileyo nolusebenzayo. Ke ngoko, iinkonzo zethu zoyilo lwewebhu ziyanelisa bonke abathengi ngexabiso elifanelekileyo.
UKUPHENDULA IMIBUZO XA UYILWA IWEBHUBHU EPHAKATHI KOMNTU
UYABUZA - MID-MAN IMPENDULO
Ngaba ufuna ukufunda ngakumbi malunga neenkonzo zoyilo lwewebhusayithi ye-MID-MAN? Jonga iimpendulo ezingezantsi!
Yintoni oyiqondayo ngoYilo lweWebhusayithi?
Uyilo lwewebhu okanye uyilo lwewebhusayithi ngumsebenzi nje wokudala iwebhusayithi yomntu, inkampani, ishishini, okanye umbutho. Kukho iindlela ezimbini eziphambili zoyilo lwewebhu: uyilo lwewebhu olungatshintshiyo kunye noyilo lwewebhu oluguqukayo. Ukufumana iinkcukacha ezithe vetshe, jonga inqaku elithi Yintoni uyilo lwewebhusayithi?
Yintoni i-SEO yoyilo lwewebhu olusemgangathweni?
Uyilo lwewebhu olusemgangathweni lwe-SEO yiwebhusayithi enolungelelwaniso kunye neempawu ezivumela iinjini zokukhangela ezifana neGoogle, Yahoo, kunye neBing… ukukhasa kunye nokuqonda iwebhusayithi yonke ngokulula. Jonga inqaku elineenkcukacha ezingaphezu kwamagama angama-3000 malunga noyilo lwewebhusayithi olusemgangathweni lwe-SEO
Yintoni uyilo lwewebhu oluphendulayo?
Uyilo lwewebhu oluphendulayo yindlela nje yokuseka kunye nokwakha iiwebhusayithi ezihambelanayo kwaye uzibonise kuzo zonke iintlobo zezixhobo zombane, ezinjengeefowuni, iitafile, iilaptops, iiPC, njl. .. nangasiphi na isisombululo, nasiphi na isakhelo sewebhu.
Ixabisa malini ukuyila le webhusayithi?
Ngokuxhomekeke kwiimfuno kunye neempawu zewebhusayithi nganye, iyunithi yoyilo ibonelela ngeendleko ezahlukeneyo zokuyila iwebhusayithi.
Kuthatha ixesha elingakanani ukugqiba uyilo lwewebhusayithi?
Ixesha lokugqiba iwebhusayithi liya kuxhomekeka kwizinto ezininzi ezifana nommandla iwebhusayithi ejolise kuyo, abathengi; utshintshiselwano uyilo kunye namaqabane, ujongano olulula okanye oluntsonkothileyo; ukusebenza kwewebhusayithi, kunye nezinye iimpawu. Ixesha lokuyila iwebhusayithi kwi-MID-MAN ngokuqhelekileyo ukusuka kwii-3-4 iiveki, ngokutshintshisana kunye namaqabane.
Ngaba umyili wewebhusayithi unenkontileka ecacileyo?
UMID-MAN uzibophelele ekubeni nekhontrakthi epheleleyo yokukhusela iimfuno zamahlakani, ukuqinisekisa ukunyaniseka, ukungafihli, kunye nokuthembeka xa usebenzisana.
Ngawo onke amava, ukuzinikela kunye nobuchwephesha, uMid-Man ngokuzithemba unika amashishini esona sisombululo silungileyo ukwenza iwebhusayithi yobuchwephesha ideisgn.
Ngày Cấp: 05/03/2021 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội
I-Hotline 1: +84 90 3401508
I-Hotline 2: +1 (484) 414-5687
Iwebhu yeTrang: https://mid-man.com/
© 2021 Mid-Man-ISicombululo soYilo lweWebhusayithi ethembekileyo kuShishino olukwi-Intanethi
Nceda ukhethe incoko ukuqala ukuthumela umyalezo.